- | साजन देवकोटा, भाइस–प्रेसिडेन्ट, सेल्स एन्ड मार्केटिङ, शिवम् सिमेन्ट यो वर्ष भूकम्पका कारण देशमा धेरै संरचना ध्वस्त भए । भूकम्पले ध्वस्त संरचना निर्माण हुन नपाउँदै मधेस आन्दोलन, भारतीय नाकाबन्दी सुरु भयो ।
बजारमा अरु सिमेन्टको तुलनामा यो सिमेन्ट अलि महँगो छ भन्ने छ नि ? सिमेन्टको मूल्य दुई चिजमा निर्भर हुन्छ । एउटा फ्याक्ट्रीमा यसको मूल्य । अर्को ढुवानी भाडा । त्यसैले उद्योग कहाँ स्थापित छ भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हो । शिवम् सिमेन्ट महँगो त भनिन्छ । तर, योभन्दा महँगोमा पनि अरु सिमेन्ट बिक्री भइरहेका छन् । हामीले पनि कति ठाउँमा निकै सस्तोमा बेच्न सकेका छौँ ।
यो स्किमको साटो मूल्य घटाउन सकिँदैनथ्यो, यसले अझै सहुलियत हुन्थ्यो होला ? स्किम धेरै प्रकारका हुन्छन् । बजारमा डिलरलाई दिने स्किम भनेको सानो हुन्छ, तर उपभोक्तालाई ठूलो चिज दिनुपर्ने हुन्छ । जसले उनीहरूलाई आकर्षण गर्छ । दोस्रो कुरा जसरी मूल्य बढेको छ, त्यसले उत्पादन मूल्य घटाउन सक्ने अवस्था थिएन । अहिले पनि छैन । फेरि अहिलेको अवस्थामा सिमेन्टमा १०–२० रुपैयाँ मात्र हो, सय–पचास रुपैयाँ घटाउन सक्ने अवस्थामा हामी छैनौँ ।
भूकम्प, बन्द–हडताल, नाकाबन्दी, इन्धन अभावको पछिल्लो अवस्थामा सिमेन्ट उद्योगरुले कसरी निर्माणकर्ताको माग पूरा गरे ? हामीले आफ्नै ओपिसी सिमेन्ट मात्र बनाउँछाँै । त्यसैले कच्चा पदार्थमा नो प्रोब्लेम । रह्यो समस्या इन्धनको कुरा । इन्धनका लागि सरकारले पनि हामीलाई सपोर्ट गर्यो । नाकाबन्दीका बेला उद्योगीलाई केही राहत दियो । सौभाग्य भनौँ, हामीसँग इन्धनको राम्रो मौज्दात भयो, वैकल्पिक इन्धन भयो । त्यति हुँदाहुँदै पनि हामीले ग्राहकको राम्रो माग धान्न त सकेनाँै । हामीले जसरी जोहो गर्दै गयौँ । त्यसैगरी उत्पादन पनि गर्दै गयौँ । तर, यति भएर पनि हाम्रो फूल फ्लेजमा उत्पादन त भएन । किनकि कहिले कच्चा पदार्थ सकिन्थ्यो, कहिले प्याकिङ मेटेरियल सकिन्थ्यो, कहिले इन्धन समस्या, त्यो सबै चिजलाई जोहो गथ्यौँं । अनि, उत्पादन गथ्र्यौं । हामीलाई पनि ठूलो असर पर्यो । तर पनि जोहो गरेर उत्पादन गर्यौँ । र पनि ग्राहकको पूरा माग धान्न सकेनाँै । निर्माणका लागि केही न केही सहयोग गर्ने काम गर्यौँ ।
तपाईंहरु निर्माणलाई सहज बनाउन पहल गरेको दाबी गनुुहुन्छ, तर तपाईंहरुका कतिपय विक्रेताले त उपभोक्तालाई चर्को मूल्यमा बेचेर मर्का पारेका छन् । अनुगमन गर्ने, आफ्नो सिमेन्ट चर्को मूल्यमा बेच्न नदिने केही गर्नुभएन ? सबैभन्दा पहिलो कुरा त जुन बेला नाकाबन्दी भयो, त्यो एकदम क्राइसिसको समय थियो । हामी नेपालीले एकदम दुःख गरेर एउटा घर बनाउँछौँ । दशैँ–तिहारको मौकामा नयाँ घरमा प्रवेश गर्नुहुन्छ । तर, यो वर्ष त्यो बेला धेरै उद्योग बन्द थिए, माग अत्यधिक भयो । जसले गर्दा माग र आपूर्तिबीच ठूलो खाडल भयो । त्यसैले अलिकति मूल्य फरक आयो ।
अहिले नेपालमा सिमेन्ट उत्पादनको अवस्था कस्तो छ ? नेपालमा सिमेन्ट उत्पादन गर्व गर्नुपर्ने अवस्थामा छ । किनकि यो एउटामात्र त्यस्तो उत्पादन होला, जसमा हामी पूर्णतः आत्मनिर्भर छौँ । अहिलेको दिनमा हामी आयातलाई शतप्रतिशत विस्थापित गर्ने अवस्थामा छौँ ।
नेपाली सिमेन्ट गुणस्तरीय छ भने किन ठूला कम्पनीमा भारतीय सिमेन्टको सिफारिस गरिन्छ त ? एक त, भारतीय सिमेन्ट नै प्रयोग गर्दै आएका पुराना प्राविधिक र निर्माणकर्ता छिटै बदलिन सकेका छैनन् होला, नेपाली सिमेन्ट प्रयोग गर्ने अनुभव नभएर । अर्को कुरा, ट्याक्स फ्री हुने निर्माणका काममा भारतबाट सिमेन्ट ल्याउँदा सस्तो पर्न सक्छ । अर्को कुनै निश्चित प्रकारको, विभिन्न प्र्रकारको सिमेन्ट माग हुन सक्छ कहिलेकाहीँ । जस्तै, नेपालमा लो अल्कालीको सिमेन्ट उत्पादन भएको छैन । त्यो माग हुन सक्छ । नत्रभने हामी ९० प्रतिशत बढी आत्मनिर्भर छौँ । यो अझै बढ्दै गइरहेको छ । यसलाई सकारात्मक रुपमै लिनुपर्छ ।